Ajụjụ-Ningbo CHEM-PLUS & JW FILM
Ihe nkiri Nchedo Nchekwa onwe
Ngwongwo Tindow Nchekwa Tint
Filmlọ / iallọ obibi
Car Kechie Vinyl Nkiri
Ngwaahịa PPF ọzọ
Ọrụ ahịa mgbe ọ gasịrị
Ọrụ .lọ Ọrụ
Agba Nchekwa Ihe nkiri Ajụjụ
Enwere m ike ịme igwe ụgbọ ala m tupu echichi ihe mkpuchi ihe nkiri KPAL?
A na-atụ aro ka ị ghara itinye wax ma ọ bụ ihe mkpuchi ọ bụla n'ụgbọ ahụ tupu ịwụnye ihe nkiri nchedo agba. Ọ bụla wax ma ọ bụ mkpuchi ga-egbochi kwesịrị ekwesị adhesion nke ihe nkiri na ụgbọala.
Etu esi kechie onu na akuku ya nke oma?
Achọrọ ka ehichaa akụkụ nke ihe mkpuchi ihu na mmiri dị ọcha, wee jiri egbe mmiri ma ọ bụ ikuku nkịtị kpoo ya, ka o wee dị larịị ma dabara nke ọma. KPAL gel gel na-atụ aro maka nhicha dị mfe.
Kedu otu esi edebe ngwaahịa ndị fọdụrụ mgbe ejiri ya?
Mgbe o gbusịrị ihe nkiri ahụ, a ga-akpọgharị ndị ọzọ maka nchekwa. PPF na ihe nkiri ntọhapụ kwesịrị ịpịkọta nke ọma, na PPF na-enweghị ntọhapụ ihe nkiri ga-akpọrepu omume rụrụ. Ọ bụrụ na a na-adọka ihe nkiri na-ewepụta ihe nkiri ahụ, elu ihe nkiri ahụ ga-abụ ihe na-adịghị edozi, obere olulu na ihe ndị ọzọ.
Window Nkiri Ajụjụ
Kedu usoro ngwa anyị ji eme ihe nkiri a?
Ihe nkiri a kwesiri itinye ya na mmiri mmiri. Anyị kwesịrị ihicha elu ahụ nke ọma ma elu ahụ enweghị mmanụ, griiz, wax ma ọ bụ mmetọ ndị ọzọ tupu echichi.
Ihe nkiri a ọ na-emetụta mgbaàmà n'ime ụgbọ ala?
Mba Mgbe mmelite nke teknụzụ imepụta ihe nkiri windo, ihe nkiri windo dị ugbu a enweghị mmetụta na mgbaàmà na ụgbọ ala.
Ogologo oge ole ka ihe nkiri window ga-adịru?
Imirikiti ihe nkiri windo ụgbọ ala nwere ike ịnwe afọ 3-5 n'èzí, ọ dabere na mma. Maka ụlọ ihe ịchọ mma ụlọ nkịtị, ọ nwere ike ịdịru ihe dị ka afọ 4-5. Na maka iru ụlọ nche ihe nkiri, ọ nwere ike ịdị ogologo oge.
Kechie Vinyl Nkiri Ajụjụ
Gịnị bụ uru nke ụgbọala wrapping?
Enwere ike iwepu ngwa ngwa na-ekpuchi vinyl nke mere na mgbe ịchọrọ ịre ụgbọ gị ị nwere ike weghachite ya na agba ya na-enweghị uru ọ ga-aba. Isi ihe mere ndị mmadụ ji etinye ụgbọ ala ha bụ na ha ga-achọ idobe ụgbọala ha mana ha chọrọ ụcha dị iche.
Vehiclegbọala na-eyiri ụgbọala ahụ ka ọ ga-emebi?
Itinye ọkachamara n'ụgbọala na-etinye ihe nkiri n'ụgbọala gị agaghị emebi agba agba gị. Agbanyeghị Ọ bụrụ na inweelarị mbadamba nkume, abrasions ma ọ bụ nchara nchara na agba gị ọ dị mkpa icheta na mgbe ewepụrụ vinyl ọ nwere ike ịwepụ agba agba ya.
Olee otú m si elekọta m vinyl Kechie?
Nlekọta nke ọma kwesịrị ekwesị na-amalite site na isi. Idebe elu ụgbọala gị dị ọcha bụ nchegbu bụ isi, yabụ ịsa ahụ aka ugboro ugboro iji wepụ ihe ndị na-emetọ ala dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi ihe mkpuchi gị ka ị ghara inwe ntụpọ ma ọ bụ mebie site na ntụpọ okporo ụzọ.
ỤLỌ ngwaahịa KPAL Service News Kpọtụrụ onye na-
Tinye: 516lọ 5, 1 / F, No.818 Building, XNUMX Jinyuan Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China.